Awudingi isiGanga seShishini ukuze uqonde oku | Martech Zone
NgoLwesithathu, Oktobha 23, 2013 NgoLwesithathu, Oktobha 23, 2013 Douglas Karr
Kulungile, lixesha lokuba rant. Kule veki ndibethiwe izihlandlo ezimbalwa kwaye ndilahlekile ngokwenyani ukuba abanye baba bantu bayenzile ukuba nje baneshishini. Ndifuna ukufumana izinto ezimbalwa ngqo xa usiya kuthethathethwano kunye nokuthenga iinkonzo kwiArhente yakho elandelayo.
Ixabiso yinto oyibhatalayo, hayi into oyifumanayo
Eli lixabiso lemveliso okanye inkonzo ojonge ukuyithenga. Ngelixa iindleko zeemveliso ezimbini okanye iinkonzo ezimbini zinokulingana ngokuchanekileyo, eyona mveliso okanye inkonzo oyifumanayo ayizukufana. Ngenxa yoko, nceda ungabuzi uluhlu lokuthenga izinto ezingenamsebenzi kwaye ucele iikowuti ezingapheliyo… siyayazi into oyenzayo. Uya kuthatha uluhlu lokuthenga kwaye ucele iikowuti zokugqibela kwaye uzithenge kubo bonke abanye abantu. Asinguye wonke umntu. Nokuba luneenkcukacha kangakanani uluhlu lokuthenga, ndiyaphinda, asinguye wonke umntu. Oko sikunika kona kuya kwahluka. Iimpawu ezahlukeneyo, iinkonzo ezahlukeneyo, amaxesha ahlukeneyo, izimo zengqondo ezahlukeneyo kwaye iziphumo ezahlukeneyo zeshishini ekugqibeleni.
Ukuba uthenga iarhente esekwe kwixabiso, uyilahleko engaliqondiyo ishishini. Apho, nditshilo. Ukuthengisa kwi-Intanethi ayisiyiWal-mart. Yiyeke.
Ukuhlawula kancinci akuthethi ukuba ugcine imali
Into ogqibe ngayo ekuvunyelwene ngayo ekuhlawuleni, ngethemba, ibotshelelwe kwixabiso oqikelela ukuba uyakufumana ngalo kunye nemveliso okanye inkonzo. Ukuba ufumene iphepha-mvume lesoftware lonyaka kwaye isoftware ikuncede ukuba wenze izinto ngokufanelekileyo (aka: Return on Investment), ikuncede ugcine ishishini elingaphezulu (aka: Return on Investment), ikuncede ukuba ufumane ishishini elingaphezulu (aka: Return on Investment) okanye Uncede ukwandisa inzuzo (aka: Return on Investment) emva koko Ixabiso lento oyifumeneyo lingaphezulu kwexabiso olirholileyo. Le yinto elungileyo. Nantsi into ofuna ukuyenza.
Kwelinye icala, ukuhlawula Ngaphantsi imali nokungafumani mbuyekezo kutyalo-mali kubi. Oku kuthetha ukuba ulahlekelwe yimali… hayi wasindisa imali. Ke… hamba uyokuthenga ilogo kwindawo yezixhobo endaweni yokuqesha iarhente yophawu kunye nokuchitha amanani amathandathu ukujongeka njengequmrhu leedola endaweni yevenkile yotywala yedolophu. Kuya kufuneka ulindele iziphumo ezahlukeneyo kunye nexabiso elahlukileyo lemali oyityalileyo.
Ukuhlawula ngaphezulu akuthethi ukuba ukhutshiwe
Umabonwakude kaMama uvele nje kule veki. Wajonga ngasemva kwaye wayeneminyaka esi-7 ubudala kwaye yabiza i-2,200 yeedola emva kokuba eyithengile. Namhlanje, uMama wam wayalela umabonwakude ongcono kakhulu ngescreen esibanzi se- $ 500. Wayemangalisiwe yindlela itekhnoloji eguquke ngayo ngokukhawuleza kwaye nendlela efikelelekayo yokuthenga ithelevishini entsha, ebhetele. Wayengacaphuki kuba wakhutshwa kwiminyaka esi-7 eyadlulayo. Wayonwabile kuba efumene into emnandi ngoku. Le yinto elungileyo.
Sitshanje uhlalutyo lwesiza oluzenzekelayo eqhele ukuthatha iveki kubantu ababini bayigqibe ngesandla. Oko kusithathe malunga neeyure ezingama-60 zomntu ngothotho lwezicelo zesoftware esinelayisensi kuzo ngoku zisithatha ngaphantsi kweyure. Ndazisa abanye babathengi bethu abonwabileyo ngokunika ingxelo kwethu kwangaphambili ukuba ngaba le nto intsha kwaye bazise-ukusukela oko iindleko zethu Ngoku liqhekeza lento ebebeyiyo, besigqithisela kolo londolozo kubathengi bethu. Kubalulekile: into abayihlawuleleyo ixesha eli-1 ngoku banokufumana unyaka wonke weengxelo kuthi.
Uninzi lutyikitye, kodwa enye yandibhalela yathi bayatshutshiswa ukuba kunjalo ikrazuliwe bahlawule kakhulu kwingxelo yangaphambili. Ewe, xa sasihambisa ingxelo, babonwabe… bengacaphuki. Baye basebenzisa ingxelo njengeplani yokuphuhlisa iqhinga labo lokuthengisa kwi-Intanethi kunyaka olandelayo. Utyalo-mali lwamawaka ambalwa edola kule ngxelo luya kubangela ukubuyela kumakhulu amawaka eedola. Yile nto kanye bebeyicinga, de sade sehlise amaxabiso ethu. Xa sisehlisile amaxabiso ngandlela thile sasuka kwixabiso elikhulu saya kwi-ripoff.
Ngoku ukuba i-rant igqityiwe, ndiza kuyithetha le nto. Siza kusebenza ngokufanelekileyo ukuqinisekisa ukuba ixabiso lomsebenzi esiwenzayo lingaphezulu kwexabiso olibhatalayo. Xa sisenza njalo, uya kufumana iziphumo zeshishini eziphezulu. Xa ufezekisa iziphumo zeshishini eziphezulu, uya kuwuxabisa umsebenzi esikwenzela wona. Ukuba asizifezekisi ezo ziphumo, sinokuxoxa ngazo nathi.
tags: NkonzokuthengaindlekoUkusebenza kakuhleunxunguphalofumana oko uhlawulayoixabisocatshulwauluhlu lokuthengainani
Oktobha 29, 2013 ngo-1: 54 PM
Oktobha 29, 2013 ngo-2: 03 PM
Ngomhla wama-13 ku-Disemba 2013 ngo-8: 28 AM